မန်ယူဟာ မန်စီးတီးနဲ့ (၁၂)မှတ်ကွာဟနေပြီး အဆင့်(၈)နေရာမှာ ရပ်တည်နေရတယ်
မန်ယူအသင်းဟာ တန်းဆင်းဖို့ မဖြစ်နိုင်သလို ချန်ပီယံလည်း မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး
14 Nov 2018 . 12:04 PM
”ကျွန်တော်တို့ အသင်းဟာ တန်းတော့ မဆင်းရလောက်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်”။ ဒါဟာ မန်စီးတီးကို စိတ်ပျက်စရာ ခြေစွမ်းနဲ့ ရှုံးနိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာ မီဒီယာတွေက ဒီရာသီမှာ မန်ယူအသင်း မန်စီးတီးနဲ့ ဘယ်လောက်အထိ အဆင့်ကွာဟနိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကို မော်ရင်ဟို Mourinho တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့ စကားပါ။ မော်ရင်ဟိုဟာ မီဒီယာတွေနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ဒီလို ဘုကန့်လန့်တွေ ဖြေကြားလေ့ရှိပေမယ့် ဒီတစ်ခါတော့ သူ့ရဲ့ စကားကို သဘောမကျဖြစ်မိတယ်။ ဒါက ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ခံစားချက်သက်သက်ပါ။
မန်ယူပရိသတ်ဖြစ်လို့ ကိုယ့်အသင်း ရုန်းကန်နေရချိန်မှာ စိတ်ပျက်မိပေမယ့် တခြားအသင်းကိုတော့ ပြောင်းလဲ အားပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခု မော်ရင်ဟိုရဲ့ အဖြေက Reality ကျတဲ့ စကားမဟုတ်ဘဲ ကလေးတစ်ယောက် ပြောချင်ရာ လျှောက်ပြောနေသလိုဖြစ်နေတယ်။ မော်ရင်ဟိုနဲ့ ပြောစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး Oddschecker ဘွတ်ကီကုမ္ပဏီရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ George Elek က ” အရမ်းအကောင်းမြင်တတ်တဲ့ မန်ယူပရိသတ်တွေတောင် ဒီရာသီမှာ မန်ယူအသင်း ထိပ်ဆုံး ပြန်ရောက်ဖို့ မရှိဘူးဆိုတာကို လက်ခံလိုက်ကြပါပြီ။ မန်ယူအသင်း တန်းဆင်းဖို့ဆိုတာ စဉ်းစားစရာတောင် မလိုတဲ့ကိစ္စပါ။ ဒီလိုပဲ မန်ယူအသင်း ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ဆိုတာကလည်း မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး”လို့ ပြောကြားခဲ့တယ်။
မန်ယူအသင်းရဲ့ ဒီရာသီ ရလဒ်တွေကို ပရိသတ်တွေ အသိပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ရိုလာကိုစတာလို ဖြစ်နေတဲ့ မန်ယူအသင်း အခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာ တည်ငြိမ်လာလို့ ချီးကျူးမလို့ပဲရှိသေး၊ မန်စီးတီးကို ခြေပြတ် ဂိုးပြတ် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြန်တယ်။ ဒီပွဲမှာ ပေ့ါဘာ Pogba မပါဘူးလို့ ဆင်ခြေပေးလို့တော့ ရကောင်းရလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါက ဆင်ခြေသက်သက်ပါပဲ။
မန်ယူဆိုတာ ပေ့ါဘာနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အရင်ကတည်းကလည်း မန်ယူဆိုတာက တစ်ဦးကောင်းဆိုတာထက် Team Work ကို ဦးစားပေးထားတဲ့ အသင်းပါ။ အခု မန်ယူအသင်းရဲ့ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဖြစ်ရေးအတွက် ဘွတ်ကီဒိုင်တွေရဲ့ အလေးပေးမှုက ၂၅၀ လေး/၁ လေး အထိ ကျဆင်းသွားပါပြီ။ ဒါဟာ မန်ယူ တန်းဆင်း၊ မဆင်းအတွက် အလေးပေးမှုနဲ့ ပမာဏချင်း အတူတူပါပဲ။ ပရီးမီးယားလိဂ် ရာသီစတာ (၁၂)ပွဲပဲ ရှိပါသေးတယ်၊ မန်ယူဟာ ထိပ်ဆုံးက မန်စီးတီးနဲ့ (၁၂)မှတ်အထိ ကွာဟနေပြီး အဆင့်(၈)နေရာမှာ ရပ်တည်နေရတယ်။
ချန်ပီယံဆုဆိုတာကို အသာထားဦး၊ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့် ရဖို့တောင် ရုန်းကန်ရဦးမယ့်အနေအထားပါပဲ။ လက်ရှိခြေစွမ်းအရလည်း မန်ယူအသင်းကို ယုံစားလို့ မရတာ အမှန်ပါ။ လက်ရှိအနေအထားကို မော်ရင်ဟို ဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲ၊ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျဆင်းလာတဲ့ မန်ယူရဲ့ အရှိန်အ၀ါကို ဘယ်လို မြှင့်တင်ပေးမှာလဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် George Elek ပြောခဲ့သလို မန်ယူ တန်းဆင်းဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သလို၊ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ ဆိုတာကလည်း မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး . .
Photo:The National,Football On Spot,Evening Standard,sportsdroid
မနျယူအသငျးဟာ တနျးဆငျးဖို့ မဖွဈနိုငျသလို ခနျြပီယံလညျး မဖွဈနိုငျတော့ပါဘူး
”ကြှနျတျောတို့ အသငျးဟာ တနျးတော့ မဆငျးရလောကျဘူးလို့ ထငျပါတယျ”။ ဒါဟာ မနျစီးတီးကို စိတျပကျြစရာ ခွစှေမျးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ပွီးတဲ့နောကျမှာ မီဒီယာတှကေ ဒီရာသီမှာ မနျယူအသငျး မနျစီးတီးနဲ့ ဘယျလောကျအထိ အဆငျ့ကှာဟနိုငျလဲဆိုတဲ့မေးခှနျးကို မျောရငျဟို Mourinho တုံ့ပွနျခဲ့တဲ့ စကားပါ။ မျောရငျဟိုဟာ မီဒီယာတှနေဲ့ အငျတာဗြူးမှာ ဒီလို ဘုကနျ့လနျ့တှေ ဖွကွေားလရှေိ့ပမေယျ့ ဒီတဈခါတော့ သူ့ရဲ့ စကားကို သဘောမကဖြွဈမိတယျ။ ဒါက ကြှနျတျောတဈယောကျတညျးရဲ့ ပုဂ်ဂိုလျရေး ခံစားခကျြသကျသကျပါ။
မနျယူပရိသတျဖွဈလို့ ကိုယျ့အသငျး ရုနျးကနျနရေခြိနျမှာ စိတျပကျြမိပမေယျ့ တခွားအသငျးကိုတော့ ပွောငျးလဲ အားပေးမှာ မဟုတျပါဘူး။ အခု မျောရငျဟိုရဲ့ အဖွကေ Reality ကတြဲ့ စကားမဟုတျဘဲ ကလေးတဈယောကျ ပွောခငျြရာ လြှောကျပွောနသေလိုဖွဈနတေယျ။ မျောရငျဟိုနဲ့ ပွောစကားနဲ့ပတျသကျပွီး Oddschecker ဘှတျကီကုမ်ပဏီရဲ့ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ George Elek က ” အရမျးအကောငျးမွငျတတျတဲ့ မနျယူပရိသတျတှတေောငျ ဒီရာသီမှာ မနျယူအသငျး ထိပျဆုံး ပွနျရောကျဖို့ မရှိဘူးဆိုတာကို လကျခံလိုကျကွပါပွီ။ မနျယူအသငျး တနျးဆငျးဖို့ဆိုတာ စဉျးစားစရာတောငျ မလိုတဲ့ကိစ်စပါ။ ဒီလိုပဲ မနျယူအသငျး ပရီးမီးယားလိဂျ ခနျြပီယံဖွဈဖို့ဆိုတာကလညျး မဖွဈနိုငျတော့ပါဘူး”လို့ ပွောကွားခဲ့တယျ။
မနျယူအသငျးရဲ့ ဒီရာသီ ရလဒျတှကေို ပရိသတျတှေ အသိပဲဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ရိုလာကိုစတာလို ဖွဈနတေဲ့ မနျယူအသငျး အခုနောကျပိုငျးပှဲတှမှော တညျငွိမျလာလို့ ခြီးကြူးမလို့ပဲရှိသေး၊ မနျစီးတီးကို ခွပွေတျ ဂိုးပွတျ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွနျတယျ။ ဒီပှဲမှာ ပေ့ါဘာ Pogba မပါဘူးလို့ ဆငျခွပေေးလို့တော့ ရကောငျးရလိမျ့မယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒါက ဆငျခွသေကျသကျပါပဲ။
မနျယူဆိုတာ ပေ့ါဘာနဲ့ တညျဆောကျထားတာ မဟုတျပါဘူး။ အရငျကတညျးကလညျး မနျယူဆိုတာက တဈဦးကောငျးဆိုတာထကျ Team Work ကို ဦးစားပေးထားတဲ့ အသငျးပါ။ အခု မနျယူအသငျးရဲ့ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံဖွဈရေးအတှကျ ဘှတျကီဒိုငျတှရေဲ့ အလေးပေးမှုက ၂၅၀ လေး/၁ လေး အထိ ကဆြငျးသှားပါပွီ။ ဒါဟာ မနျယူ တနျးဆငျး၊ မဆငျးအတှကျ အလေးပေးမှုနဲ့ ပမာဏခငျြး အတူတူပါပဲ။ ပရီးမီးယားလိဂျ ရာသီစတာ (၁၂)ပှဲပဲ ရှိပါသေးတယျ၊ မနျယူဟာ ထိပျဆုံးက မနျစီးတီးနဲ့ (၁၂)မှတျအထိ ကှာဟနပွေီး အဆငျ့(၈)နရောမှာ ရပျတညျနရေတယျ။
ခနျြပီယံဆုဆိုတာကို အသာထားဦး၊ ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့ ရဖို့တောငျ ရုနျးကနျရဦးမယျ့အနအေထားပါပဲ။ လကျရှိခွစှေမျးအရလညျး မနျယူအသငျးကို ယုံစားလို့ မရတာ အမှနျပါ။ လကျရှိအနအေထားကို မျောရငျဟို ဘယျလိုပွောငျးလဲမလဲ၊ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ကဆြငျးလာတဲ့ မနျယူရဲ့ အရှိနျအဝါကို ဘယျလို မွှငျ့တငျပေးမှာလဲ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ George Elek ပွောခဲ့သလို မနျယူ တနျးဆငျးဖို့ဆိုတာ မဖွဈနိုငျသလို၊ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံဖွဈဖို့ ဆိုတာကလညျး မဖွဈနိုငျတော့ပါဘူး . .